Ambdị Mambabatok. Whang-od, onye nketa ikpeazụ nke omenala Filipino | Igbu egbugbu
Ambdị Mambabatok. Whang-od, onye nketa ikpeazụ nke ụdị omenala Filipino
Whang-od na-akwadebe ịme egbugbu (Fuente).
Na Buscalan, obere obodo di na Philippines, ọ na-adị ndụ Whang-od Oggay, a na narị afọ nwanyị onye bụ ikekwe ikpeazụ artist nke egbugbu mambabatok, a ụdị Omenala omenaala Filipino.
Chọpụta ihe kachasị adọrọ mmasị akụkọ ihe mere eme nke a nwanyị na nke a artdị egbugbu en peligro na-apụ n'anya na-agụ nke a post!
1 Ndụ nke ntinye uche na nka
2 Omenala na akuko
3 Site na mgbagwoju anya Manila gaa jụụ Buscalan
4 Otu n'ime ndị ikpeazụ mambabatok tattooists si Philippines?
5 Whang-od na-enweta nnabata kwesịrị ekwesị
Ndụ nke ntinye uche na nka
Ogwe aka nke nwanyị ochie, nke jupụtara na egbugbu (Fuente).
La ndụ Whang-od nwere njikọ chiri anya na ndị a Omenala egbugbu Site na Philippines. Nwanyị ochie ahụ na-egbu egbugbu kemgbe afọ iri na ise. Su nna kụziiri ya otú na, ọ bụ ezie na mbụ ya egbugbu ha akọghị nke ọ bụla uru akụ na ụba, nke nta nke nta ọ na-emere onwe ya aha.
Nwe Wang-od nwere ahu nwetara egbugbu, nke na-ele anya kemgbe ọ bụ a afọ iri na ụma. Nke mbụ bụ Eke Ọgba n’elu ubube.
Omenala na akuko
Ọnwụ ndị a na-achọ akwa dexterity na ume maka mgbu! (Fuente).
na egbugbu mambabatok site Whang-od bụ ikpeazụ dị ndụ sample nke a art. A na-ahụta atụmatụ ha site na ịnwe ebumpụta ụwa y jiometrị. Mbinye aka gị bụ egbugbu de isi ato. Ndị a egbugbu, nke na-eso a usoro nke na-aga azụ karịa afọ otu puku, emere ha na a instrumental dị mfe, dị ka Efrata nke ink: mmiri y unyi.
Na, dị ka ọ fọrọ nke nta niile omenala motifs, mmekọrịta nke onye na-eme anwansi ya nka ọ fọrọ nke nta anwansi, na juputara na nkwenkwe ụgha na akụkọ mgbe ochie.
Dịka ọmụmaatụ, na mbido Wang-od egbugbu ndị dike ugbua ndị inyom nke ógbè ha chọrọ ịchọ akpụkpọ ha mma, ma were ya mee ya egwu y amụma. Ma, na okfu nke ndị dike na abawanye na ndị njem nleta, na egbu egbu egbu ọ kwụsịrị ịbụ abụ na ịkọ ọdịnihu nke ndị ahịa ya. Nwanyị ochie ahụ kwenyere na nke ahụ egwu ha diri ya chọọ mma nke ụmụ nwanyị nọ n'ógbè gị na ememme nke mmeri nke ndị dike.
Na mgbakwunye, nke ọ bụla egbugbu mambabatok nwere a akara nnọọ kpọmkwem na njikọ chiri anya na omenala si na obodo. Dịka ọmụmaatụ, ya egbugbu ugo sere onyinyo na a Dike gburu a onye iro.
Site na mgbagwoju anya Manila gaa jụụ Buscalan
Tattoolọ ahịa Whang-odFuente).
Nke a na-asọpụrụ egbu egbu egbuỌzọkwa, ọ gaghị adị jụụ. N'agbanyeghị inwe ihe karịrị otu narị afọ, ma kwụsị otu izu na 2017 maka ahụike, nara acceptiri ato ndị ahịa otu ụbọchị!
na ndị ahịaỌzọkwa, ha na-esi n'ebe dị anya erute n'ime ime obodo Ha chọrọ. Ha na-aga site na nnukwu ubi nke Philippines mgbe ha hapụrụ ime mkpọtụ site n'obodo ndị dị ka Manila, na ịrị elu Ndagwurugwu na-eduga na obodo ebe a rickety ịrịba ama na-ekwupụta ọnụ ụzọ nke ụlọ obi pere mpe nke egbu egbu egbu.
Otu n'ime ndị ikpeazụ mambabatok tattooists si Philippines?
Nwa nwanne nwanyị Whang-od ga-abụ otu n'ime nne nne nwanne nne nwanne ya (Fuente).
Daashi Wang-od nke ahụ enweghị ike iji kesaa nkà ya nye onye ọ bụla n'ihi na ọ ga-abụ a ọdịnala hapụ ya ka o mee n’otu aka ahụ Familia. Ma egbugbu nọ n'ihe ize ndụ nke nweta ọrịa. Dị ka ọ na-amụtaghị nwa, ọ dị ka ihe nketa nke egbugbu mambabatok ọ ga-efu ebe a.
Luckily e nwere otu obere olileanya: ya nwa nwanyi nwanne Grace Palicas na ndị ọzọ so n’ezinụlọ enweela mmasị na omenala nka nke egbugbu mambabatok. Ọ bụ ezie na ha ihe kpatara ya ọ bụghị otú ahụ mgbagwoju anya dị ka ndị nke Wang-od, nakwa na egwu y amụma, ịbụ onye nwere ọnụ n'okike, ga-efu ya nwanyi ochie, ọ dị ka nke a ezinụlọ nka nwere ọdịnihu.
Whang-od na-enweta nnabata kwesịrị ekwesị
A okokụre mambabatok igbu (Fuente).
Ọ bụ ezie na ma eleghị anya Wang-od adịla otú ahụ ama dị ka ndị ọzọ na-ese ihe nke egbugbu dị ka Kat Von Dna Philippines o zuru mara, ma nata ụfọdụ nhoputa a ga-ewere dị ka mmadụ mma na akụkụ nke Omenala obibisitere na obodo a.
Na mgbakwunye, ọ pụtawo na dị iche iche documentales na ụfọdụ ngosi. Na 2017 o sonyekwara na a mgbakọ n'akuku ya ndi omumu.
Akụkọ nke Kedu, nke ikpeazụ mambabatok tattoo artist, o doro anya na-akpali akpali. A dị iche, dị mfe ndụ, kpamkpam raara nye a n'ihe ize ndụ nka, ma gịnị ga-agwụ ndụ, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ site n'ụzọ nke ihe dị iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ndị na-ese egbugbu » Ambdị Mambabatok. Whang-od, onye nketa ikpeazụ nke ụdị omenala Filipino
Anchor tattoos na nkwonkwo ụkwụ: nchịkọta nke aghụghọ
Ihe eji egbu egbu n'olu: nchịkọta nke aghụghọ